नार्कको नेतृत्व लिन को–को छन् दौडधुपमा ? « Pahilo News
नार्कको नेतृत्व लिन को–को छन् दौडधुपमा ?
प्रकाशित मिति :3August, 2017 8:56 am
१९ साउन । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को कार्यकारी निर्देशकको पद खाली रहेपछि अहिले नार्कभित्र कार्यरत मुख्य वैज्ञानिकहरुको दौडधुप सुरु भएको छ । पूर्व कृषि विकास मन्त्री गौरीशंकर चौधरीसँग टक्कर गरेका कार्यकारी निर्देशक डा. वाईआर पाण्डेको पदावधि सकिएपछि अहिले नार्कभित्रै कर्मचारीहरु सो पदमा पुग्न लालायित देखिएका छन् ।
कृषि विकास मन्त्रालय मातहत रहे पनि नार्कले एक स्वतन्त्र निकायको रुपमा काम गर्दै आइरहेको छ । तर, बेलाबखत मन्त्रीले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा विवादसमेत उत्पन्न हुने गरेका छन् । यसअघिका दुई सरकारका पालामा सो मन्त्रालय माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो । तत्कालीन मन्त्री हरिबोल गजुरेलको पालामा त्यति विवाद नभए पनि गौरीशंकर चौधरीको कार्यकालमा भने विवादमा मुछिएको थियो । अहिले भने सो मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसले पाएको छ । मन्त्री रामकृष्ण यादव भर्खरै नियुक्त भएका हुँदा उनले सो मन्त्रालयबारे बुझ्न अझै केही समय लाग्ने बताइन्छ ।
नार्कको कार्यकारी निर्देशकबाट डा. पाण्डेले अनिवार्य अवकाश पाएपछि अहिले कांग्रेस निकट मुख्य वैज्ञानिकहरुले दौडधुप सुरु गरेका छन् । कांग्रेसकै मन्त्री भएका हुँदा सबभन्दा बढी दौडधुप योजना महाशाखाका निर्देशक आनन्दकुमार गौतमले गरेका छन् । उनी कांग्रेस निकट भएका हुँदा आफूले नै कार्यकारी निर्देशक पाउनुपर्ने दाबी गर्दै मन्त्रीसमक्ष कुरा पु¥याइसकेका छन् ।
नार्कका निमित्त कार्यकारी निर्देशक वैद्यनाथ महतोले पनि कार्यकारी निर्देशक बन्ने रुचि देखाएका छन् । अहिले आर्थिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख महतो कुनै राजनीतिक दलमा खुलेर नलागे पनि मधेसबासी व्यक्ति मन्त्री भएका हुँदा उनले त्यही आधारमा लबिङ गरिरहेको बताइन्छ । त्यसो त, नार्कमा कार्यरत १२–१३ जना मुख्य वैज्ञानिकहरु कार्यकारी निर्देशकका लागि इच्छुक रहे पनि अहिले दौडधुप भने गौतम, महतोका साथै पशु तथा मत्स्य महाशाखाका प्रमुख टेकबहादुर गुरुङ, खुमलटारस्थित नेपाल कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठानका प्रमुख विन्देश्वर साह, मुख्य वैज्ञानिक दीपक भण्डारी समेत कार्यकारी निर्देशक बन्न इच्छुक देखिएका छन् ।
चार वर्षका लागि नियुक्त हुने कार्यकारी निर्देशकको छनोटका लागि कृषि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय टोलीले विज्ञापन गरेपछि नार्कका मुख्य वैज्ञानिकहरुले निवेदन दिने प्रक्रिया रहेको छ । निवेदन दिएकामध्ये सुरुमा ९ जना र त्यसपछि तीन जना छनोट गरेपछि नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गरिएको छ । कृषि मन्त्रीले प्रस्ताव गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्ने भएको हुँदा अहिले कार्यकारी निर्देशकको दौडमा रहेकाहरुले मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मै लबिङ गर्दै आइरहेको बताइन्छ ।